Ejikọta saịtị na Eke Ọgba na MmaSpeak - Ntụziaka dị elu
E nwere ihe karịrị ozi zuru ezu na ịntanetị banyere otu esi ewepu weebụsaịtị na blọọgụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ihe dị anyị mkpa abụghị naanị ịnweta data ahụ mana ụzọ ndị a pụrụ isi nweta ya, nyochaa ma hazie ya. Python na BeautifulSoup bụ ngwá ọrụ abụọ dị ebube iji wepụ weebụsaịtị ma wepu data. Na ntanetị weebụ, enwere ike ịchọta data na ngwa ngwa na usoro ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ maka ego nke na-eji oge ya na ego ya egwu, ị ghaghị ịmepụta usoro ntanetị weebụ ma mee ya dị ka ọ kachasị mma.
Anyị ga-eji Python na BeautifulSoup dị ka asụsụ nchịkọta isi.
1. Maka ndị ọrụ Mac, Ekeburu Python na OS X. Ha ga-emeghe oghere ma bipụta na ntụgharị-eke . N'ụzọ dị otú a, ha ga-enwe ike ịhụ mbipụta Python 2.7.
2. Maka ndị ọrụ Windows, anyị na-akwado ịwụnye Python site na saịtị ya.
3. Na-esote, ị ga-enweta ohere akwụkwọ mma na BeautifulSoup site na enyemaka nke pip. Ejiri ngwá ọrụ ngwugwu a mee ihe karịsịa maka Eke Ọgba.
Na njedebe, ị ga-etinye koodu a:
pip ịwụnye BeautifulSoup4
Iwu nchịkwa kachasị mkpa ị ga - elekọta bụ:
1. Ị ga-elele Iwu na Iwu nke saịtị ahụ tupu ịmalite ya..Ya mere kpachara anya!
2. I kwesịghị ịrịọ data site na saịtị ndị ahụ na-ewe iwe. Jide n'aka, ngwá ọrụ ị na-eji eme ihe n'ụzọ dị mma. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike imebi saịtị ahụ.
3. Otu arịrịọ kwa nke abụọ bụ omume kwesịrị ekwesị.
4. Ịmepụta blog ma ọ bụ saịtị ahụ nwere ike ịgbanwe oge ọ bụla, ma ịnwere ike ịlọgharị na saịtị ahụ ma degharịa koodu gị mgbe ọ bụla ọ dị mkpa.
Lebanye anya na Page
Bube gi cursor na Ahịa peeji nke iji ghọta ihe kwesiri ime. Gụọ ederede metụtara HTML na Eke Ọgba, na site na nsonaazụ, ị ga-ahụ ọnụahịa n'ime mkpado HTML.
Akaụntụ HTML ndị a na-abịakarị n'ụdị nke
Bupụga na Excel CSV
Ozugbo i wepụtara data ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịchekwa ya na-anọghị n'ịntanetị. Ụdị Ntọala Ụdị Excel bụ nhọrọ kachasị mma na nke a, ma ị nwere ike ịmepe ya ngwa ngwa na akwụkwọ Excel gị. Mana nke mbụ, ị ga-ebubata Python CSV modules na oge modul oge iji dekọọ data gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Enwere ike ịtinye koodu a n'ime mpaghara mbubata:
site n'oge ahụ batara na oge ahụ
BeautifulSoup bụ otu n'ime ihe ndị dị mfe ma dị irè ngwaọrụ maka ntanetị weebụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịkwesịrị iwepụta nnukwu data nke data, tụlee ihe ndị ọzọ:
1. Ọgwụ bụ ihe dị ike magburu onwe ya.
2. I nwekwara ike ijikọ koodu ahụ na API ọha mmadụ. Ịrụ ọrụ nke data gị ga-adị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnwale Facebook Graph API, nke na - enyere aka zoo data ma ghara igosi ya na ibe Facebook.
3. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike iji mmemme backend ndị dịka MySQL ma chekwaa data na nnukwu ego na oke ezi.
4. DRY na-anọchite anya "Emela Onwe Gị" ma ị nwere ike ịnwa ịmegharị ihe omume niile site na iji usoro a Source .